Nagarik News - नक्कली 'मिस नेपाल'
मिस नेपालमा भिड्ने उमेर अभिनेत्री शुभेच्छा थापाको होइन, उनकी छोरीको भएको छ। तर, १६ वर्षे छोरीकी आमा शुभेच्छा अचेल मिस नेपालमा भिडिरहेकी छिन्। उसो त आफूलाई मेन्टेन गरेकै कारण जवान छोरीकी आमा भनेर पत्याउन पनि मुश्किल पर्छ। त्यसैमाथि 'नक्कली मिस नेपाल'मा भिड्ने भएपछि उमेरको हदबन्दी हुने कुरै भएन। आफैँले निर्माण गरेको फिल्म 'दी मिस नेपाल'मा मिस नेपाल बन्न शुभेच्छा कसिएकी हुन्।
तर, उनलाई नक्कली मिस नेपाल पनि बन्न नदिन मिस नेपालको सक्कली आयोजक हिडेन ट्रेजरले दबाब दिएको छ। फिल्मको कथालाई कुनै हालतमा नचुहाउने योजनासहित सुटिङ भइरहेको फिल्म 'दी मिस नेपाल'मा साँच्चीकैको मिस नेपाल बन्दा चुकाउनुपर्ने मूल्य समेटिन सक्ने डर भयो होला आयोजकलाई। नत्र किन डराउनु? उनले गर्न चाहेको र हुन चाहेको नक्कली मिस नेपाल हो क्यारे!
र्‍यान्डममा पहिचानको बहस
र्‍यान्डम रिडर्स सोसाइटी अफ नेपालले हरेक महिना अन्तिम शनिवार गर्ने बहसमा यसपटक पहिचानको मुद्दालाई समेटेको छ। भारतीय लेखक उदय प्रकाशको उपन्यास 'मोहन दास'माथि साहित्यकार अभय श्रेष्ठले बहस चलाए।
किशोर कुमारका किस्सा
गायक, संगीतकार, अभिनेता, निर्माता र लेखक किशोर कुमारका अनेक रूप थिए। गायक र अभिनेताका रूपमा उनी बढी चर्चित थिए। संगीतको तालिमबिना नै बलिउड संगीतमा उनले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाए। हालै...
सेतो पर्दा : बहिष्कार सही नीति होइन
एक महिनाअघि काठमाडौँमा इन्फा फिल्म अवार्डले मनोनयन सूची सार्वजनिक गर्‍यो। त्यसपछि फिल्म 'झोले'ले तुरुन्तै अवार्डमा आफू सहभागी नभएको विज्ञप्ति निकाल्यो। 'झोले'जस्तै सती प्रथाको कथा रहेको चर्चित फिल्म 'झोला'ले पनि अवार्ड...
जासुस झिंगा बनाउँदै अमेरिका
अमेरिकी सेनाका अनुसन्धानकर्ताहरू झिंगाको आकारका स–साना रोबोट विकास गर्ने कार्यमा जुटेका छन्। यस्ता झिंगाजत्रा रोबोटलाई दुश्मनहरूको अखडामा कसैलाई पत्तै नदिई परिचालन गर्ने योजना अमेरिकी सेनाको छ।